Author: Gardalkree Grokasa
Sharax Xadiiska dacfi baa ku jira buu leeyahay laakiin daciif ma aha. Markaa ninkaasu ninkee buu marka noqonayaa?
Imaamu Shaafici- radiyal Laahu canhu- isagoo masaladan ka hadlaaya buu bluuuqul wuxuu yiri xadiiska masaladaa kusoo arooray jiritaankiisa ma sugayaan culumada xadiisku. Laakiin qeybta dambe wuxuu ku sheegayaa in xadiiskani daciif yahay. Qof darawal ah oo jid ku socda haddii ilmo yar ama qof waayeela ama haweenay ama wax sidaasi ka hor yimaadaan, ardada jaamacaddaan weydiin jirey, dhiniciisana masjid uu yahay oo hadduu ka qabo is yiraaho masjidka uu ku dhacaayo oo masjidka duminaayo, haddii aanu qabaninna uu qofkaa dilaayo, midkoodee buu dooranayaa?
Markaa kol haddaynan nijaas ahayn hambadeeda in lagu weysaysto, biyuhuu ku weysaysanaayuu maraak qalloociyoo ay ka cabtay weelkiina markaa waxba lagama dhaqin, biyihiina lama daadinin, biyihii wuu ku weyseystay Abuu Qataadah- radiyal Laahu canhu.
Saddex kala dardaran bay ahaayeen oo kulligood daciif bay wada ahaayeen. Danta koowaad ee aanu ka leenahay casharadan diyaarintoodu waa in mzraam fahmaan xadiiska Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- kuna dhaqmaan. Qullatayn waa qullah oo laba laga dhigay. Biyahu hadday fara badan yihiinna xadiiskii Ibn Cumar baynu kusoo marray iyada dhib malaha. Midda labaad waxa weeye kaadidisii in biyo lagu shubo oo biyo lagu daahiriyo la amray.
Marka xukunku wuxuu noqonaayaa [haddii] raggiyo haweenku intay isla galaan musqusha- dabcan labadii isqabta weeyaan- [oo] ay iskula qabeystaan weelkana dhexdooda intay dhigtaan wada dardarsadaan inaynan dhib lahayn. Hadduu xadiisku dheer yahay, faqra kasta cinwaan-hoosaad baanu u samaynay si akhrintu u fududaato. Sidaas darteed waxaa dhacda inta badan in sheekhu aanu turjumin kalmadaha qaarkood ee uu carabi ku maro.
Related Posts BIBEK DEBROY ATA EPUB
Laakiin arrintaa khilaaf kuma jiro. Hadday iskula qabeystaan inay bannaan tahayna iyaduna waxaa imaan doona xadiis kale. Xadiiska markaa isaga macnihiisu waxaa weeyaan eygu weelkuu afka la galo inuu nijaasoobayo weelkii iyo sharaabkii ku jireyba. Markaa shilinta iyo shinnida iyo dukhsiga iyo kabajaaga iyo jirriqaaga iyo waxa noocaas oo kale ah biyahay ku dhacaan ee ay ku dhintaan waa inaanay nijaasaynayn. Mashruuca qoraal-u-rogista casharadii Shaykh Shariif Cabdinuur W: Mashruuca qoraal-u-rogista casharadii Buluusul Shariif Cabdinuur Website: Search in Wajibad Search for: Saddexdaa riwaayadood marka laysu geeyo waxay noqonaysaa biyaha fadhiya inaan laguna kaajin laguna qabeysanin labadiina aan laysku darin isagoo lagu kaajo iyo isagoo lagu dhex qabeysto.
Isagoo masjidkii meel kale kaadidii sii gaarsiiyaana mafsada kalay ahayd.
Kalamadahan oo kale waxaan ku bedelnay sida caadi ahaan loo qoro Af Soomaaliga: Rasuulkii Buluuquul sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu ka yiri: Xadiiskanina markaa kii horuu la mid yahay oo Bayhaqi baa markaa lafdigan isagu ku weriyey.
Sharax Yacnii biyo uu nin ku qabeystay baaldi iyo wax la mid ah oo intuu musqul la galay uu ku qabeystay, haweenay inaynan kaga daba qabeysanin wixii kusoo haray, biyo cusub inay qaatado mooyaane.
Naaskuu deydeyaayoo carrabkuu soo bixbixanayaayoo wax uu jaqaa buu deydeyayaa. Xadiisku markaa wuxuu tusinayaa: Xadiiskanu waa kaan kitaabka kalena kusoo marray ee dhahaayey: Tanu markaa labadii riwaayo, riwaayadii Muslim ee ugu horreeysay iyo tii Bukhaari bay isku dartay oo labada arrimood bay midba gaarkeed u mancinaysaa reebaysaa ; inuu biyihii fadhiyey ku kaajo gaarkeed bay u nahyidey, biyihii fadhiyey inuu janaabo kaga dhex bu,uuqul oo dhex galana gaarkeeday u nahyiday reebtay.
Markaa daliilkaasuu xukunku ku sugnaaday ijmaaca ah mooyaane xadiiskan maanu ku sugnaanin. Salliga Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- ma aanaan Soomaaliyeyn ee sidiisa ayaan u deynay.
Tii hore waxay ahayd inuu biyaha intuu ku kaajo haddana ku dhex qabeystaa loo diidayey. Daatadiisu [jirkiisa] inay nijaas tahay yuu keenayaa, maxaa yeelay afkiisi haddii la yiri wixii uu geliyo waa uu nijaaseeyey, macnuhu waxa weeyaan inuu afkiisu nijaas yahay, afkiisa iyo lugtiisa iyo dabadiisana ma kala duwana.
Related Posts LIBRO PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA GITMAN PDF
Labada dhiigna beeryarta iyo beerka weeyaan. Waxaan casharada u samaynay cinwaano. Waana sidaa uu sheegay oo xadiisku saxiix weeyaan, waxaa saxiix yeelay Albaanii: Sharax Abii Qadaata na magaciisu waa al Xaarith ibn Ribciyy. Xadiiska isnaadkiisuna waa saxiix, isnaadka ragga weriyey [xadiiska] baa la yiraahaa. Mxraam ey afka la galo weelkii oo uu afka geliyo markaas daahirinta la daahirinayaa waxa weeyaan maraamm dhaqo todoba goor inuu dhaqo midda ugu horraysaayu ciid mid lagu daray ay tahay.
Xadiisku buluuqjl saxiix oo waxaa saxiix yeelay shaykh Albaanii: Sharax Biyaha fadhiya raakid na waa la yiraahaa waana isku macne, biyahaan soconin weeyaan, [qofkiin] Isagoo janaaba qaba biyihii intuu dhexgalo yaanu ku dhex qabeysanin. Markaa maraak macnaheedu waxa weeyaan biyihii haddii lagu kaajo fadhiyey inay saa ku nijaasoobayaan, waa inayse biyahaasu yihiin biyo yar oo qullataynka ka yar. Haddaan lagu qabeysan karin markaa kumana weyso qaadan karo.
Sidaas ayey culumadu sheegeen inay habboon tahay- sallal Laahu calayhi wasallam- taas ayaana sharci ahaan sugan. Siduu u keenayaa waxa weeyaan, meeshii kaadidu ay ku dhacday marka lagu shubo wadaan buuxda, biyihii way qulqulayaan oo meeshay kaadidu gaartay meel aan ahayn bay sii gaarayaan. Xadiiskan riwaayada Abii Daawuudna marka iyadu saxiix weeyaan waxaa saxiix yeelay Shaykh Albaani: Qallajiya oo kolkuu qallalo ayuu iska daahiroobayaa ma aanuu dhihin Nebigu- sallal Buluuquul calayhi wasallam.
Biyihii kolkay usoo dhigtay gabadhii uu soddoga u ahaa marawm bisadi timi rabta inay cabto, bisaddii buu weelkii u qalloociyey markaasay ka cabtay weysadii.
Markaa weriyihii daciifka ahaa wuxuu helayaa cid ku raacday wixii uu weriyey oo waa ku xoogaysanayaa. Ibn Cumar radiyal Laahu canhumaa waxaa laga weriyey in uu yiri:
UCHO DYNIA 125 EPUB DOWNLOAD